Chii chinonzi kudzorera uye kukanda? | Ehupfumi Zvemari
Mumwe wemibvunzo yakamutswa nechikamu chikuru chevatengesi inyaya dzine chekuita neiyo kuongorora kwehunyanzvi. Uye pakati pavo, simbisa ruzivo rwekuti chii uye zvinoreva manhamba sehunhu sekukwevera kumashure nekudzosera kumashure uye sei tora mukana wavo mukushanda yakaitwa mumisika yemari. Zvakare pamwe nezvavanoreva zvavari, pakati pezvimwe zvezvinhu zvakakosha kwazvo. Nekuti ivo vanogona kukubatsira iwe mune inopfuura imwe nguva kutsanangura mafambiro aunokudziridza mumusika wemasheya kubva panguva dzino.
Tisati taenda zvizere mutsananguro dzake, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvese zvinodzosera kumashure uye kukanda kumashure zvinogona kunge zvinonakidza manhamba ekugadzirisa kutenga nekutengesa masheya muhomwe. Kupa chero zvodii nhungamiro dzekupinda nekubuda mumisika yemari. Ehezve, ivo vanozove chishandiso chine simba kukubatsira kuti iwe kuchengetedza kwako kubatsire. Kubudikidza nekubudirira kukuru mune yega yega mashandiro anotongwa pasi peiyi zano rekudyara.
Chero zvazvingaitika, dambudziko hombe riripo pakushandisa kwekudzosa kumashure uye kukanda ndeyekuti ivo vanoda a Chikamu chekudzidza kuti havazi vese vashoma uye vepakati varimari vane panguva ino. Iwe ungatofanira kuyedza izvi zvakakosha manhamba pamusika wemasheya kuburikidza neanenge mashandiro Pasina kufumura mari yako kune njodzi dzisingakoshi dzinogona kukupa zvinopfuura kamwechete kusagutsikana kubva ikozvino. Nekudaro, iwe unogona kugadzirisa dambudziko iri ikozvino ndedzinotevera tsananguro.
1 Kudhonza kumashure semunhu mukuru
2 Mashandiro emufananidzo uyu?
3 Tsananguro yehunyanzvi yekudhonza kumashure
4 Chii chinonzi kurasa?
5 Chinangwa chekufamba uku
Kudhonza kumashure semunhu mukuru
Ichi chikamu chemusika wemasheya chakakosha kuti iwe udzokere kuzoita mashandiro pamusika wemasheya nekuchengetedzwa kukuru uye kugona kuishandisa zvizere. Zvakanaka, iyo yekudzosera kumashure ndeye kupora kufamba kuti mutengo weaseti unoita mushure mekurasa nzvimbo yekutsigira mukudonha kwayo. Zviri nyore kuti uzvione nekuti nzvimbo ino inoonekwa kune vese varairidzi nekuti iri pamatanho akanyatsotsanangurwa kuburikidza negirafu. Ndokunge, ndezve zvekufamba kudzoka kune iyo yakarasika rutsigiro kana izvo zvakafanana, ndiko kudzoka kumutengo wepakutanga.
Kudhonza kumashure kwakajairika uye zvirokwazvo haugone kuivhiringidza ne Shanduko yemaitiro, sezvazviri kune vanoita mari vasina ruzivo rwakanyanya murudzi urwu rwekushanda. Kune rimwe divi, ine yakanyanya kukwirira kumusoro, inogona kusimba kupfuura nakare uye iyo inogona kushandiswa kupinda kana kuvhura zvigaro mumatanda akakanganiswa neaya akakosha mafambiro. Zvisinei, kana chikamu chekutsigira chaputsika, kudhonza kumashure kwakabviswa kuti utange kuvandudza chikamu chitsva chebhara.
Mashandiro emufananidzo uyu?
Chero zvazvingaitika, kudhonza kumashure kunoda kurapwa kwakasiyana zvakanyanya kana iwe uchida kunyatsoishandisa kubva ikozvino. Nekuti zvirokwazvo, iwe haugone kukanganwa izvo nguva yayo inokurumidza kwazvo sezvo zvinoitika muzvikamu zvishoma kwazvo zvekutengesa. Ichi chiri chimwe chehunhu hwacho hwakakosha uye chii chinosiyanisa nacho kubva kune mamwe emusika masheya Inonyanya kubatsira kuwana muhombe muhombe kuwana mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva uye nekudaro iwe unofanirwa kunyatsoteerera kutarisiko kwavo. Ivo vanoratidzwa mumagrafu uko shanduko yemitengo yemitengo inoratidzwa.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kwazvo kuti kudhonza kumashure chive chimiro chakanakisa chekugadzirisa munzvimbo dzekuchengetedza. Nekuti kana mutengo wangodzokera kune iyo poresi yakaitwa, inodzokera ku nzvimbo shoma umo mutengo unodzoka. Semhedzisiro yeiyi yakasarudzika tsika, pakupedzisira mhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti iyo yekuderera kwetambo yaputswa. Zvinorevei nhepfenyuro yemafambiro aya? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka senge isu takatarisana nechiratidzo chakasimba chekukwira kumusoro uko vatyairi vasingakwanise kupotsa.
Tsananguro yehunyanzvi yekudhonza kumashure
Uku kufamba kwemusika wemasheya kunoreva kuti maitiro maitiro anogadzirwa ayo akagadzwa muzvikamu zvina kusvikira mutengo wepakutanga wawanikwazve. Mune mamwe mazwi, nzvimbo inogara varimi vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari inodaidza kuzorora. Kusvikira pakuti irwo ruzivo rwakakosha kuita mhando mbiri dzekufamba kwatinokufumura pazasi.
Iyo yakakodzera nguva iyo iwe yaunogona tenga chengetedzo nechinangwa chekuita kuti ive inobatsira pamatanho epamusoro ekugutsikana.
Panguva iyo iwe uchafanirwa kurongedza musuo we mutengo kupfuura wakagadziriswa kuitengesa nemutengo uri nani panguva yekubvisa zvigaro mumatunhu akachengetedzwa nemufananidzo uyu.
Kubva pane ino mamiriro ezvinhu, chimwe chezvinhu zvakakosha izvo zvinokodzera kuongororwa inyaya yekuti zvakakosha kuti uongorore kusvika kwazvinogona kusvika. Nekuti zviripo, mikana yacho yakafara kwazvo uye zvakaomarara kuganhurira kana kuvatungamira kune yakawanda kana shoma yakatarwa nguva yenguva. Kwete pasina, kana kudhonza kumashure kuchionekwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti iri imwe yematanho nyore kuziva. Ichi ndicho chimwe chezvakanakira zvinogadzirwa nekushandisa zano iri mukudyara uye iro rinogona kukudziridzwa pasina matambudziko akawandisa, kunyangwe kune vanoita mari vasina ruzivo rwakadzama mumhando iyi yekushanda yakakosha uye inobatsira zvido zvavo.
Chii chinonzi kurasa?
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo zvirimo zvemusika uyu wemusika uye zvinopa akateedzana misiyano iri nyore kunzwisisa. Asi panguva imwechete zvinobatsira zvikuru kuita kuti mipiro yemari mumusika wemasheya ibatsire. Sezvo mune yapfuura stock stock nhamba, chishandiso chinodikanwa che chiteshi kutenga uye kutengesa kwemasheya muhomwe. Naizvozvo, kubatsira kwayo kwakapetwa kaviri, sezvo uchizokwanisa kuona pazasi. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kutora ako ekutanga marongero mumisika yequity.
Nekuti hazvigone kukanganikwa kuti chimiro chinozivikanwa sekukanda kumashure chakaumbwa senge fambiro iri inopesana neiyo yapfuura. Ndokunge, mutsauko uri nyore kwazvo kutsigira, sezvo kudhonza kumashure kuri kufamba kumashure mushure mekuzorora kune rakadzika, nepo kukanda iko iko kwekudzosera kumashure mushure mekupaza kuenda kumusoro. Saka mashandisiro ayo ndeaya anopikisa, sezvo iine zvinongedzo zvebhara uye iri yambiro yakajeka yekutengesa zvikamu zvaunazvo mupotifoliyo yako.
Kune rimwe divi, zviri nyore kuona senge mune yekudzokera kumashure uye zvinogona kungo nyonganiswa neakadzika maitiro shanduko semhedzisiro yekutengesa kumanikidza kubva kune vanoita mari. Imwe mhosho inogona kuitwa nevashandisi vevatengesi ndeyekuti ivo vanogona kufunga kuti mutengo uri kunyatso kupokana nemushonga kana danho rekutsigira. Nekuti ivo vari muchinzvimbo chekuvhiringidzika kana zvakapusa zivise ivo nezviratidzo zvakawanda uye oscillators ekuongorora kwehunyanzvi, senge iyo RSI, MACD kana Bollinger Bands, pakati pevamwe vanonyanya kukosha pamusika wemasheya. Imwe yekiyi yekutora mukana neruzivo rwatinogona kupihwa nenhamba idzi kuziva kuziva kuti ungasiyanisa sei nekujeka. Hazvishamise kuti iwe unenge wawana ivhu rakawandisa kana zvasvika pakushanda kwaro kumabasa ako mumisika yemari.
Chinangwa chekufamba uku
Chero nzira, chimwe chinhu icho iwe chauchange uchitarisa panguva ino chaiyo ndicho chinangwa icho aya akakosha manhamba pamusika wemasheya ari kumisikidzwa. Zvakanaka, usambokanganwa kuti aya ndiwo mafambiro kumashure. Iko kuputika kweimwe technical mutengo wero. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye ndosaka iwo ari anoshanda kwazvo pakutengesa mashandiro ayo anoda kuratidzwa kukuru kuratidza hutungamiri hwekufamba uye kana paine chero rudzi rwechinjo mumutengo wemasecurity.
Kune rimwe divi, uye pakupedzisira, kuratidza kuti aya manhamba mukana wakakura wekuita mabasa ekutenga nekutengesa emasheya emusika wemasheya. Nenzira iyi, kana izvo zvatiri kutarisana nazvo zviri zvekutiza, kurasa kunoreva kuti inguva yakakodzera kuti kukudziridza kutenga. Nepo pane zvinopesana, kana isu tiri mune yeiyo bearish chimiro, iyo yekudzosera kumashure ndiyo chiratidzo iwe yaunoda kuti utore kutengesa. Nekuti iwe unomhanyisa njodzi yekuti masheya anowedzera kudzika kwawo nehukuru huturu uye unogona kurasikirwa nemari pane mari yawakagadzira kusvika zvino.
Kune rimwe divi, zvakare inovhura mukana wekuti iwe upinde musangano watanga uye wawakange wasiya kunze nekuda kwechero mamiriro ezvinhu. Sezvauri kuona, kubatsira kwayo ndechimwe chehunhu hwayo hwakakosha uye kuti iwe unogona kutora mukana izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chinonzi kudzorera uye kukanda?
Iyo mbiri yekupinda nzira